Tranga vaovao voalohany mitondra ny tsimokaretina COVID-19 Omicron no voamarina tany Japon
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Tranga vaovao voalohany mitondra ny tsimokaretina COVID-19 Omicron no voamarina tany Japon
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny governemantan'i Japana dia nanambara androany fa lehilahy iray 30 taona mahery, izay nanao fitiliana tsara ho an'ny coronavirus tao amin'ny hopitaly Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Narita, tamin'ny fahatongavany avy any Namibia ny alahady, dia tena voan'ny karazana Omicron vaovao mampatahotra ny otrikaretina COVID-19.
Ity no tranga voalohany voamarina ofisialy momba ny otrikaretina Omicron ao amin'ny firenena.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny minisiteran’ny fahasalamana dia tsy nisy soritr’aretina ilay lehilahy rehefa teo Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Narita saingy voan'ny tazo tamin'ny alatsinainy, raha nisy fianakaviana roa niara-dia taminy dia nanao fitsapana ratsy ary voatokana ao amin'ny trano iray voatendrin'ny governemanta.
Anarana Ny praiminisitra Fumio Kishida dia nihaona tamin'ireo mpikambana ao amin'ny kabinetra anisan'izany ny minisitry ny fahasalamana Shigeyuki Goto mba hiresaka momba ny fomba hamalian'ny governemanta ny fahitana ny tsimokaretina Omicron ao amin'ny firenena. Japana, izay nahitana fihenan'ny tranga COVID-19.
Omaly, nanambara i Kishida fa amin'ny ankapobeny dia mandrara ny fidiran'ny teratany vahiny rehetra ny governemanta. Nampanantena izy fa hanao hetsika haingana amin'ny ahiahy momba ny variana Omicron vaovao an'ny COVID-19.
Japana dia efa nandray fepetra henjana kokoa tamin'ireo olona tonga vao haingana tany amin'ny iray amin'ireo firenena Afrikana sivy – Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambika, Namibia, Afrika Atsimo, Zambia ary Zimbaboe.
Haato ihany koa i Japana ny fanalefahana ny fameperana vao haingana manomboka ny 8 Novambra, izay nahafahan'ireo mpanao raharaham-barotra vita vaksiny hanana fe-potoana fijanonana fohy kokoa ary nanomboka nanaiky ny fangatahana fidirana avy amin'ny mpianatra sy ny mpiasa ara-teknika raha manaiky handray ny andraikiny ny fikambanana mpampiantrano azy. manara-maso ny fihetsik’izy ireo.
Manomboka amin'ny alarobia, hametraka ny fetra isan'andro ho an'ny fahatongavana ho 3,500 ny firenena, raha 5,000 izany. Ny olom-pirenena japoney miverina sy vahiny dia tsy maintsy mitoka-monina mandritra ny tapa-bolana na dia efa vita vaksiny tanteraka aza izy ireo.
Omaly, tranga 82 vaovao voamarina momba ny COVID-19 no voarakitra manerana an'i Japana, isa ambany dia mety ho vokatry ny fihenan'ny fitsapana tamin'ny faran'ny herinandro. Ny onjan'ny otrikaretina teo aloha nateraky ny variana Delta tamin'ny fahavaratra dia nahitana tampon'isa mihoatra ny 25,000 isan'andro.